mairie-antananarivo – Famaranana ny fivoriana ara-potoana ny filan-kevitra monisipaly
administrateur 12 janoary 2018 Commentaires fermés
Lany tao amin’ny Fivoriana aram-potoanan’ny Filankevitra Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay nodinihana nandritra ny 10 andro ka nifarana ny Zoma 12 janoary 2018 ny Teti-bola iasana ho an’ny taona 2018 eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ; Nasiana fanamarihana ka mila jerena manokana ny fidiram-bolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny alalan’ny Toeram-pivoahan’ny daholobe na ny WC Public sy ny eny amin’ny tsena.
Momba ny tetik’asa eo anivon’ny Tsipy kanetibe kosa dia nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fanapahankevitra satria mbola mila fandinihana lalina . Fantatra koa fa nekena nandritra ny fivoriana ny hanofan’ny orinasa SATOM ny tanin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra eny Mahavelona Ankazobe izay manana velarana 832 metatra toradroa ka 1 Tapitrisa Ariary isam-bolana no vola miditra amin’ny CUA amin’izany , ity orinasa ity ihany koa no hisahana ny fiarovana ny faritra manodidina 45 Ha .
Manaraka izany dia nomen’ny Filankevitry ny Tananan’Antananarivo alalana ny fanangonan-ketra miditra amin’ny CUA amin’ny alalan’ny finday na ilay antsoina hoe : Mobile Banking saingy tsy maintsy hajaina kosa ny lalàna ; Hahazoana tombotsoa ity fomba iray ity satria afaka hialana amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly. Nekena koa ny hampiasana ny toerana eny amin’ny fasam-bahiny Anjanahary ho an’ ireo olona miisa 18 nanao fangatahana ary nahazo baiko ny Mpanatanteraka ny hitakina ny vola tokony mbola hiditra teo taloha sy ny vaovao.
Momba ny antsoina hoe “Plan d’Urbanisme de Détail” kosa izay mahakasika ny tany eny Andraharo dia tapaka fa mbola mandalo ao amin’ny Kaomisiona atao hoe : Commission d’ Urbanisme ny raharaha. Amin’ny ankapobeny dia misy lohahevitra 4 lehibe no fonosin’ny Tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra 2018 dia ny Tetibola amin’ny fandaminana sy fandrindrana ny asa ; ny Tetibola ho an’ny fotodrafitr’asa ; ny Tetibola momba ny Sosialy sy ny Kolontsaina ary ny Tetibola ho an’ny Fitsinjaram-pahefana mba tsy hivangongo aty amin’ny foibe.